Gorgorka Shaqaale Muhiim Ah Laga Dhigay
Arrimah ugu muhiimsa ee qalabka Xidigiska iyo hawada sare loo adeegsado (Astronomical equipment) ayaa ah inay nadiif ahaadaan , iyagoo markaasi u sheqeeya sid ugu wanaagsan. Sidaas darteed xarunta European space station ee loo yaqaan Estrack ayaa shaqaalaysay shimbir Gorgor ah si uu ilaaliyo nadaafada xaruntan.
Gorgorkan oo lagu magacaabo Nalla ayaa u sheqeeya sida qof ilaaliye ah ( bodyguard) iyo kaaliye isagoo ka ilaaliya shimbiraha iyo dhammaan wixii nadaafadiisa waxyeelo u geysanaya iyo dhammaan xayawaanada kale ee hawada maraya, kuwaasi oo qaybta sare ee xaruntan waxyeelo dhinaca nadaafadda ah u geysanaya.
Adrian Rubio Botelho oo ah ninka leh Gorgorkan ayaa ku tababaray inuu noqdo mid hawlahan ilaalinta nadafada si fiican uga soo baxa. Waxaana Gorgorkani qaata mushahar sare oo ah ilaaliyaha nadaafadda hawada sare.